Mamiratra ny hazavana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Mamirapiratra ny hazavana
Hitan'ny ririnina fa manjary maizina ny andro ary mihamaina ny alina. Ny haizina dia tandindon'ny zava-mitranga eran-tany, ny haizina ara-panahy na ny ratsy.
Niandry ny ondriny tany an-tsaha akaikin’i Betlehema ny mpiandry ondry tamin’ny alina, ka tampoka teo dia nisy famirapiratana nanodidina azy ireo: “Ary nisy anjelin’i Jehovah tonga teo aminy, ary ny fahazavan’i Jehovah namirapiratra manodidina azy; ary natahotra indrindra izy ireo » (Lioka 2,9).
Niresaka fifaliana lehibe izay tokony hitranga amin'izy ireo sy amin'ny olona rehetra izy, "fa ankehitriny Ilay Mpamonjy niteraka an'i Kristy". Nandeha tany ireo mpiandry ondry, nahita an-dry Maria sy Josef, ilay zaza nitafy lamba diaper, nidera sy nidera an 'Andriamanitra ary nanambara izay reny sy hitany.
Izany no fifaliana lehibe nampitain'ny anjely tamin'ny mpiandry ondry, olona tsotra nanambady teo an-tsaha. Izy ireo dia nampiely ny vaovao tsara hatraiza hatraiza. Mbola tsy tapitra ny tantara nampanantenaina.
Rehefa niresaka tamin’ny olona i Jesosy tatỳ aoriana, dia hoy Izy taminy: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao. Izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” (Jao 8,12).
Ao amin'ny tantaran'ny famoronana, ny tenin'ny Baiboly dia manambara aminao fa ny Mpamorona dia nampisaraka ny mazava tamin'ny haizina. Noho izany dia tsy tokony hahagaga anao izany, nefa mety ho gaga ianao fa i Jesosy mihitsy no fahazavana mampisaraka anao amin'ny maizina. Raha manaraka an'I Jesosy sy mino ny teniny ianao dia tsy mandeha amin'ny haizina ara-panahy fa manana ny fahazavan'aina. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mitoetra ao aminao ny fahazavan'aina, dia iray amin'i Jesosy ianao ary mamirapiratra amin'ny alalanao. Tahaka ny iray ao amin'i Jesosy ny Ray dia mitovy aminy koa ianao.
Manome didy mazava ho anao i Jesosy: “Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Aoka hazava eo imason’ny olona ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny Rainareo Izay any an-danitra » (Matio. 5,14 ary 16).
Raha mitoetra ao aminao i Jesosy dia mamirapiratra aminao amin'ny mpiara-belona aminao. Toy ny jiro mamirapiratra izy io, dia mamirapiratra ao amin'ny haizin'izao tontolo izao ary mankasitraka izay rehetra voasarika ny mazava marina.
Mamporisika anao aho hamela ny fahazavana hamirapiratra aminao amin'ity taom-baovao ity.